Bayaanka Ka soo baxay Shirweynaha Culimada Soomaaliyeed – Radio Daljir
Abriil 23, 2019 4:46 g 0
Waxaa la isku raacay in Shirweynaha culimada Soomaaliyeed uu noqdo shir sanadle ah
Waxay Culimadu isku raacsan yihiin in Soomaliya ay tahay Dal Muslim ah, Sunni ah, mad-habkeeda Fiqhiga ahina yahay mad-habka shaaficiga.
Waxay Culimada Soomaaliyeed isku raaceen in shacabka Soomaaliyeed iyo Dowladdiisuba ay yihiin dad Muslimiin ah, sidaa daraaddeed kooxaha bannaystay gaalaysiinta iyo dilkoodaba ay yihiin kuwa baal marsan Diinta Islaamka, waajibna ay tahay in meel looga soo wada jeesto.
Waxay sidoo kale culimadu isku raaceen in ay xaaraam tahay in la maal-geliyo, la taageero, gabbaad lasiiyo ama la gacan-siiyo ururrada/kooxaha xagjirka ah ee hubaysan
Waxaan ugu baaqaynaa Kooxaha aaminsan caqiidada gaalaysiinta dadka muslimiinta ah in ay Allah u towbad keenaan joojiyaanna gaaleysiinta ummada Soomaaliyeed.
Culimadu ayagoo gudanaya dawrkooda diiniga ah waxa ay dardar galin doonaan in ay kala shaqeeyaan Ummadda Soomaaliyeed ka hortagga iyo daweynta xagjirnimada.
Shirweynaha Culimada waxaa uu adkeynayaa in la hirgaliyo qorshaha Dhab u heshiinta umadda Soomaaliyeed iyo in laga shaqeeyo siyaasadeed dhab u heshiin oo hirgasha.
Waxaan adkaynayaa in si deg deg ah loo ansixiyo Xeerka Dhismaha Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka Soomaaliya, lana dhiso Golaha Sare ee Arrimah Islaamka si culumada soomaaliyeed u gutaan kaalintooda sida ugu habboon;
Waxaan ku baaqaynaa in la adkeeyo midnimada iyo dhaxalka sooyaalka diimeed ee ummadda soomaliyeed ay leedahay.
Waa in si deg deg ah loo dhameystiro dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka si nidaam garsoor oo huffan loo helo;
Waxaan ku baaqaynaa in la xoojiyo wadajirka iyo midnimada Culimada Soomaaliyeed ayna meel ugasoo wada jeestaan wacyigelinta bulshada ee ku aadan baal marsanaanta dinnta ee kooxaha dhiiga ummadda banaystay
Waxaan adkaynaynaa in Wasaaradda awqaafta iyo Arrimaha Diinta & Culimada Soomaliyeed ay hubiyaan xeerarka iyo Dastuurka Dalka, si loo xaqiijiyo waafaqsanaanta shareecada Islaamka.
Culimadu waxay ku baaqayaan in la adkeeyo ilaalinta anshaxa & aadaabta islaamka iyo ka foogaanshaha wararka been abuurka ah ee bulshada lagu marin habaabinayo.
Waxaan sidoo kale si cod dheer ah ugu baaqaynaa in la dhiso hay’adda wanaag-faridda iyo xumaan reebista
Culimadu waxay adkaynayaan n la xoojiyo kaalinta Haweenka Soomaaliyeed ee ku aaddan Horumarinta Bulshada, nabadeynta iyo barbaarinta
Culimada Soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan beelaha Soomaliyeed ee iska hor imaadyadu ka jira in ay joojiyaan colaadaha iyo dhiigga walaal ee ay sida xaqdarrada ah isaga daadinayaan.
Waxay culimada soomaaliyeed ugu baaqayaan madaxda dawlad gobolleedyada dalka in ay ka fogaadaan khilaafaadka dib u dhac ku samayn kara, ilaaliyaan midnimada dalka iyo dadka, ismaandhaafka siyaasiga ah ee jirana lagu xalliyo wadahadal, is aqbalaad iyo isu tanaasul.
Waxay Culimadu soo dhawaynayaan dadaallada wacyigalineed ee ka hortagga iyo la dagaallanka argagixisada ee ay wadaan ha’adaha dawladda.
Culumadu waxay ugu baaqayaan Dowladda in ay dedejiso meel marinta hindise sharciyeedka la dagaalanka xagjirnimada iyadoo lagala tashanayo culumada.
Waxaan ku baaqaynaa in la meelmariyo baaqii, fatwadii iyo dardaarannadii kasoo baxay shirkii kan ka horreeyay ee magaalada Muqdisho lagu qabtay sanadkii 2013.
Waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa tawbad keen iyo Alle u laabasho loo dhan yahay iyo in la sameeyo roob-doon dalka oo dhan ah.
Waxaan Allaah weydiisanaynaa in uu ummadda Soomaaliyeed siiyo Nabad waarta iyo Nolol wanaagsan.